SIDA LACAGTA U QAADANAYSA MACLUUMAAD DHEERAAD AH - Dhibaatooyinka Leyliga ah
Home » blog » Sidee baa loo yaqaan 'Detox Physical Body' oo saameyn weyn ku leh maqaarkaaga
Source source: Pexels.com
Maalin kasta, dadku waxay ku dhacaan sunta hawada, cuntada, iyo biyaha ay cabbaan, ma iloobaan waxyaabaha shakhsiyadeed ee loo isticmaalo maqaarka maalin kasta. Waxyaabaha sunta ah waxaa ka mid ah sunta cayayaanka, kiimikada caaga ah, iyo dareerayaasha. Inkastoo aad isku dayi karto sida ugu fiican ee aad u xakamayso waxyaabahan, hadana inta badan ma suura galin in laga fogaado dhammaantood.
Jirkaaga ayaa si gaar ah loo sameeyey oo leh hay'ado habeen iyo maalinba u shaqeynaya si ay u nadiifiyaan oo ay tirtiraan waxkasta oo sunta ah ee ku jiri kara. Maqaarku waa kan ugu muhiimsan waxaana ugu wanaagsan in uu jirka ka dhejiyo. Waxa kale oo jirka ka difaacaya wixii waxyeello ah oo waliba ilaaliya walxaha diyaar u ah in laga saaro. Ogsoonow in maqaarku yahay mid ka mid ah xubnihii ugu horeeyay ee muujiya saamaynta sunta xad-dhaafka ah ee jirka. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'idooyinka aad maqaarkaagu ku raaxeysan doono dawada jirka ee buuxa.
Mar kasta oo aad dhidid, jirkaagu wuxuu sii deynayaa 10% dhammaan walxaha sunta ah ee jirkaaga. Sidaa darteed, xitaa inta lagu jiro Dab-bakhtiin daahirsan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ka shaqeyso si jidhkaaga u sii deyn karo sunta si dhakhso ah. Maqaarkaagu sidaas awgeed, wuxuu kaa caawinayaa jidhkaaga intiisa kale in uu kudhaco. Biyaha laftirka cayayaanku waa la og yahay in lagu dhigi karo dhidid ka badan habab kale oo wax lagu shito.
Markaad doorato qorshe qaylo-dhaan, hubso in ay sidoo kale ka caawiso in la nadiifiyo waxkasta oo sun ah oo laga yaabo inuu maqaarka hoostiisa ku jiro. Waxyaabaha sunta ah waxay sidoo kale ka mid yihiin alaabooyinka quruxda badan ee soo uruuriya taasoo keenta jajab. Waxaad ku farxi doontaa nacasta, maqaarka oo maqaarka ka dib qaabsocodka daaweynta sababtoo ah jirkaagu wuxuu noqon doonaa mid nadiif ah oo caafimaad qaba.
Nidaamka Nidaamka Badbaadinta
Iyadoo aan lahayn sun badan oo jirka ah, nidaamka difaaca ayaa awood u leh bixinta badbaadinta loo baahan yahay. Maqaarku wuxuu ku dhacaa xadgudubka ugu badan maalintii oo dhan. Tusaale ahaan, waxaa jira waqtiyo aad si khalad ah ugu dhufan lahayd lugtaada miiska ama inaad iska goosatid adiga marka aad cunto karinaysid. Dhaawacyada noocan oo kale ah waxay noqon karaan khatar, iyadoon loo eegin sida ay u yaryihiin, haddii difaaca jidhku uu hooseeyo.
Dhaawacyada maqaarku waxay u nugul yahiin infakshanka bakteeriyada sababtoo ah unuggan ayaa soo baxa. Sidaa daraadeed, qorshaha shucaaca wuxuu sare u qaadayaa nidaamka difaaca jirka si markaasi waxyeelladaasi aysan u noqon mid aad u adag in lagu bogsado xitaa adigoon gargaar ka helin dhakhtar. Marka lagu daro qorshaha khariidadda, waxaad u baahan tahay inaad si buuxda u bedesho habka noloshaada oo aad u hubiso inaad ku hawlan tahay hawlo dhexdhexaad ah oo kaa caawin doona kahortaga cudurada in aad u qaadato jirkaaga. Jidhku wuxuu muujinayaa calaamadaha ugu horreeya ee caafimaadka jirran. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka hortagto cudurrada inaad ka gasho qayb kasta oo ka mid ah jirkaada dhammaan kharashyada. Beyonce waa tusaale fiican ee faa'iidooyinka cajiibka ah ee kaamilada jirka oo buuxa.
Dadka intooda badan waxay ku qaadaan in miisaanka culus ay saameyn ku yeelan karaan xubnahaaga gudaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira siyaabo badan oo loola macaamilayo maqaarkaaga. Mid ka mid ah, marka jirkaaga ku badan yahay miisaanka, wuxuu noqonayaa insulin u adkaysata. Marka tani dhacdo, maqaarkaagu wuxu bilaabaa inuu yeesho dhejis madow oo loo yaqaan nigricans acanthosis. Kuwani caadi ahaan waxay dhacaan halka ay ku yaalaan maqaarka maqaarka ama meesha ay ka buuxsanto. Kordhinta lakabyada jirka oo idil ayaa sidoo kale jidhkaaga ka dhigaya inuu ku daboolo qoyaan, taas oo noqonaysa bakteeriyada dhulka. Meelahaasi waxay noqon karaan cuncun waxayna bilaabaan inay kuulaan, oo kugu dhejiyaan infekshannada khamiirka.
Miisaanka dheeraadka ah sidoo kale waxay kordhisaa fursadaada inaad sameysid calaamadaha jaantusyada, kuwaas oo aan la jecelyahay. Waxay si fudud ugu kalsoonaan karaan isku kalsoonaantaada. Xaaladahan waxaa looga hortagi karaa haddii aad ku hayso miisaan caafimaad leh. Nadiifinta jirka oo buuxda ayaa kuu sahleysaa inaad lumiso miisaan badan oo dhakhso ah. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aad miisaanka ku hayso si aad marwalba u hesho maqaarka oo saafi ah.
Dib u dhigga Saameynta Waayeelka
Gabaygu waa wax aan looga hortagi karin. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad wax ka baran karto Hollywood-ka waa in ay jiraan waxyaabo sidaas oo kale ah oo gaboobay. Ka hor intaadan maqlin lafahaaga markaad istaagto, waxaad dareemi doontaa gabayo maqaarkaaga. Waxay bilaabi doontaa inay lumiso midabtakoorka, noqoto mid adag, xittaa bilowdo khafiifinta. Maqaarkaagu wuxuu noqdaa mid jilicsan marka sannadaha soo socda. Maaraynta culus iyo maqaar la'aan lacag la'aan ah oo ka timaadda maqaarkaaga waxay ka ilaalineysaa da'da qaangaarka ah. Ugu dambeyntiina, waxay dareemeysaa nacfi iyo jilcan.
Sidoo kale waa hab fiican oo laysaga ilaalin karo lafdhabarta. Iyada oo la nadiifinayo iyo maqaarka weyn ee jirka, waxaad ku nasan doontaa maqaarkaaga iyo hagaajinta wareegga. Ericka Baldwin ayaa wax ku ool ah dib u dhigista da'da iyadoo la isticmaalayo qalabka jirka ee buuxa.
Rets of Bad Odor
Afkaagu ma aha qaybta kaliya ee jirka ka soo uray urka cuntada aad cunayso. Maqaarkaagu sidoo kale wuxuu u eg yahay inuu uriyo sida ugu badan ee aad u gashey jidhkaaga. Tusaale ahaan, waxaad ogaan doontaa in dadka cabta khamriga iyo biyaha yar ay u muuqdaan inay leeyihiin dhidid naxdin leh. Shakhsiyaadka cabba biyo badan ayaa dhadhamiya inta badan, laakiin urta lama barbar dhigi karo. Haddii loo isticmaalo in lagu cuno cunto aan caafimaad lahayn, waxaa jira fursado ay dadku ku sheegi karaan oo kaliya iyagoo urinaya maqaarkaaga. Dareemo wuxuu kaa caawinayaa in laga takhaluso buunshaha aadka u daran oo maqaarkaaga u eegaya oo urinaya cusub.
Sababta ugu weyn ee aad ugu baahan tahay in lagu joojiyo waa in la hubiyo in tayada noloshaada ay hagaagto. Nidaamka wax lagu yareeyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dareento inaad naftaada aad u wanaagsan tahay iyo sidoo kale wanaajiso sida aad u eegi kartid ama aanad qurxin. Waxaad dareemi doontaa xoogaa aad u firfircoon maalin kasta.
Sameeyaa 2018 Maalinta Maalinta Jacaylka